အိန္ဒိယနိုင်ငံ၌ နှစ်ကုန်ပိုင်းတွင် နိုင်ငံတကာလေကြောင်းပျံသန်းမှု ဝန်ဆောင်မှုများ ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်မည် - Xinhua News Agency
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၌ နှစ်ကုန်ပိုင်းတွင် နိုင်ငံတကာလေကြောင်းပျံသန်းမှု ဝန်ဆောင်မှုများ ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်မည်
ပေကျင်းမြို့၌ နေထိုင်သူလူဦးရေ ၁၀ သန်းကျော် COVID-19 အားဖြည့်ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပြီးဖြစ်
တရုတ်နိုင်ငံက နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းထံ COVID-19 ကာကွယ်ဆေး ၁.၈ ဘီလီယံကျော် ပံ့ပိုးကူညီခဲ့
အိုမီခရွန် ကိုရိုနာမျိုးကွဲဗိုင်းရပ်စ်၏ ပြည်ပ အခြေအနေသစ်များ
အိန္ဒိယနိုင်ငံ မွန်ဘိုင်းမြို့ရှိ Chhatrapati Shivaji Maharaj အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်၌ PPE ဝတ်စုံ ဝတ်ဆင်ထားသည့် ခရီးသွားများအား ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် မေ ၂၅ ရက်တွင် တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
နယူးဒေလီ ၊ နိုဝင်ဘာ ၂၅ ရက်(ဆင်ဟွာ)
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၌ နိုင်ငံတကာ လေကြောင်းပျံသန်းမှု လုပ်ငန်းများ မကြာမီ ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်ရန် မျှော်မှန်းထားကြောင်း ဒေသတွင်း မီဒီယာက နိုဝင်ဘာ ၂၄ ရက်တွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။
နိုင်ငံတကာလေကြောင်းပျံသန်းမှု ဝန်ဆောင်မှုများ စောနိုင်သမျှအစောဆုံး နှင့် ယခုနှစ် နှစ်ကုန်ပိုင်းတွင် ပုံမှန် ဖြစ်စေရန် မျှော်မှန်းထားကြောင်း အိန္ဒိယနိုင်ငံ လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးဖြစ်သူ Rajiv Bansal ၏ ပြောကြားချက်ကို ကိုးကား၍ ဒေသတွင်းမီဒီယာက ဖော်ပြခဲ့သည်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည့် လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး အထွေထွေညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန(DGCA) က စီးပွားဖြစ် နိုင်ငံတကာ ခရီးသည်တင်လေကြောင်းပျံသန်းမှုများ အိန္ဒိယနိုင်ငံ မှ/သို့ ပျံသန်းခြင်းကို နိုဝင်ဘာလ ၃၀ ရက်အထိ ဆိုင်းငံမှု ရှိနေမည် ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ပြောကြားခဲ့သည်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံသည် COVID-19 ရောဂါ ကူးစက်ပြန့်နှံမှုအား ထိန်းချုပ်ရန် ပြီးခဲ့သည့်နှစ် မတ်လတွင် တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် lockdown ချမှတ်ထားချိန်တွင် နိုင်ငံတကာ ခရီးသည်တင်လေကြောင်းပျံသန်းမှုများသည် ရပ်ဆိုင်းထားခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။
နှစ်လနီးပါး ရပ်ဆိုင်းမှုများ ပြုလုပ်ပြီးနောက် ပြီးခဲ့သည့်နှစ် မေလ ၂၅ ရက်တွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၌ ပြည်တွင်းလေကြောင်းပျံသန်းမှုများ ပြန်လည်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။နိုင်ငံတကာလေကြောင်းပျံသန်းမှုများအား ဆက်လက်ရပ်ဆိုင်းခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
သို့ရာတွင် အိန္ဒိယအာဏာပိုင်းများက ပြီးခဲ့သည့်နှစ် မေလမှစ၍ နိုင်ငံတကာအထူးလေကြောင်းပျံသန်းမှုများအား လည်ပတ်ခဲ့ပြီး ပြီးခဲ့သည့်နှစ် ဇူလိုင်လကတည်းက သတ်မှတ်ထားသောနိုင်ငံများ ၊ ဒေသများနှင့်အတူ နှစ်နိုင်ငံ လေကြောင်းပျံသန်းရေး သဘောတူညီချက်များအရ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ပြီးခဲ့သည့်အပတ်တွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံ လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ဝန်ကြီး Jyotiraditya Scindia သည် ကမ္ဘာ့နေရာတစ်ချို့တွင် COVID-19 ကပ်ရောဂါအခြေအနေများအား စောင့်ကြည့်နေစဉ်အတွင်း နိုင်ငံတကာလေကြောင်းပျံသန်းမှုလုပ်ငန်းများ ပုံမှန်ဖြစ်စေရေးအတွက် အစိုးရအနေဖြင့် လုပ်ငန်းစဉ်များအား ချင့်ချိန်နေကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ (Xinhua)
Int’l flight services to return to normal in India by year end
NEW DELHI, Nov. 24 (Xinhua) — International flight operations are expected to return to normal soon in India, local media reported Wednesday.
Local media quoted Rajiv Bansal, an official of India’s ministry of civil aviation, as saying that international flight services are expected to be normalised “very soon” and “by the end of this year.”
As per the country’s civil aviation watchdog — Directorate General of Civil Aviation (DGCA), commercial international flights to and from India shall remain suspended until Nov. 30.
International commercial flights have been suspended when India imposedacomplete nationwide lockdown in March last year to contain the spread of the COVID-19 outbreak.
Domestic flights resumed operations in India on May 25 last year after nearly two months of suspension. International flights continue to remain suspended.
However, Indian authorities have been operating special international flights since May last year and under bilateral “air bubble” arrangements with select countries and regions since July last year.
Last week India’s federal civil aviation minister Jyotiraditya Scindia said the government was evaluating the process for normalising international flight operations, while keeping in mind the COVID-19 pandemic situation in certain parts of the world. Enditem
Photo – Passengers wearing personal protective equipment (PPE) arrive at Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport in Mumbai, India, May 25, 2020. (Xinhua/Stringer)